कसरी अमेरिका पुग्यो चिनियाँ रहस्यमयी हाँस? (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कसरी अमेरिका पुग्यो चिनियाँ रहस्यमयी हाँस? (भिडियो सहित)
एजेन्सी । अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा नयाँ पाहुना पुगेको छ । एक रंगीबिरंगी हाँस ।
न्यूयोर्कका मानिसहरु त्यो बेला चकित परे जब उीहरुले एक प्रकारको अनौठो हाँस सहरको सेन्ट्रल पार्कमा देखे ।
यो एक भाले हाँस थियो । यो अमेरिकमा फेला पर्नु कुनै सपनाभन्दा कम थिएन । कथा शुरु हुन्छ १० अक्टुबरबाट । केही पंक्षीप्रेमिहरुको एक समूह ‘म्यानहेटन बर्ड अलर्ट’ले न्यूयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा तालमा तैरिरहेको मनमोहक पंक्षीको भिडियो ट्वीटरमा पोस्ट ग्रयो ।
यसपछि मानिसहरु यो मनमोहक पाहुनालाई हेर्न सेन्ट्रल पार्क पुगे । मानिसहरुको पार्कमा निकै भीड लाग्यो । म्यानहेटन बर्ढ अलर्टका अनुसार यो यो हाँस यति राम्रो थियोकी उसले क्यारोलीनाबाट पार्कको सबैभन्दा राम्रो हाँसको उपाधि खोस्यो ।
यो हाँसको नाम मंदारिन हो । मंदारिन चीनको भाषा हो । मंदारिन हाँस चीन, कोरियाली द्वीप र जापानमा पाइन्छ । यो हाँस यती राम्रो छ की न्यूर्योकका इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताबीच छिटै लोकप्रिय भयो ।
आफ्नो विशिष्ट रंगका कारण यो हाँसलाई कुनै पनि पृष्ठभूमिमा सजिलै देख्न सकिन्छ ।
माइक्रोबायोलोजिस्ट र जानवरका डाक्टर इंस्टाग्राम यूजरले उनलाई कयौं पंक्षीबारे खोजी गरेको भन्दै मंदारिन हाँस सजिलै चिनिने बताएका छन् ।
मंदारिन हाँस पूर्व एशियामा पाइन्छ । सेन्ट्रल पार्कको चिडियाखानाले यहाँ देखिएको मंदारिन हाँस चिडियाखानाको नभएको बताएको छ ।
म्यानहेटन बड अलर्टले यहाँ कुनै मालिकबाट भागेर यो हाँस सेन्ट्रल पार्क पुगेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । न्यूयोर्कमा हाँस पाल्न प्रतिबन्ध छ ।